के चिन्ताले ED निम्त्याउँछ? चिन्ता-प्रेरित ईडी कसरी हटाउने - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के तनाव र चिन्ताको कारण ईडी हुन सक्छ?
के तनाव र चिन्ताको कारण ईडी हुन सक्छ?
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) ले लगभग असर गर्दछ संयुक्त राज्य अमेरिकामा २०% पुरुष , तर तनाव, चिन्ता, र यौन स्वास्थ्य बीचको लिंक अक्सर सम्बोधन गरिएको छैन। मनोवैज्ञानिक इनपुटहरूले शरीरलाई इच्छित समयमा eretions प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ — मानसिक विचलनले त्यो क्षमतालाई असर गर्छ।
यौन प्रतिक्रिया चक्रका चार मुख्य चरणहरू छन्: इच्छा, उत्तेजना, तृप्ति, र विश्राम। इरेक्टाइल डिसफंक्शन विशेष रूपमा उत्तेजनासँग सम्बन्धित छ। चिन्तित वा तनाव महसुस गर्न कठिनाई महसुस गर्न वा यौन सुखको अनुभव गर्न सक्छ।त्यहाँ धेरै गलत धारणा छन् कि ईरेटिबल डिसफंक्शनको इच्छा, स्खलन, वा यहाँ पनि चरमोत्कर्षको साथ केहि हुन्छ, भन्छरायन बर्गलन्ड, एमडी, क्लिभल्याण्ड क्लिनिकमा ग्लिकम्यान यूरोलोजिकल एण्ड किड्नी संस्थानमा एक यूरोलोजिस्ट।यो पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न र सम्भोगको लागि पर्याप्त निर्माण कायम गर्न असक्षमता हो।
के तनाव वा चिन्ताले इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुन सक्छ?
चिन्तालाई निम्त्याउने कुनै पनि कुराले निर्माण प्राप्त गर्ने क्षमतालाई रोक्न सक्छ, डा।बर्गलुन्ड।त्यो दैनिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, र प्रदर्शन चिंता समावेश गर्दछ।
साइकोोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन
जब बाह्य तनाव र अन्य मनोवैज्ञानिक कारकहरू ED पछाडि हुन्छन्, यसलाई साइकोोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। यो सामान्यतया दुई तरिकामा हुन्छ। चिन्ताले मानसिक व्याकुलता उत्पन्न गर्दछ, यसले सेक्समा ध्यान केन्द्रित गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। वा, तनावले सहानुभूतिशील स्नायु गतिविधि बढाउन सक्दछ (सोच्नुहोस्: झगडा वा उडान प्रतिक्रिया)।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, निर्माणलाई उत्तेजित गर्ने स्वायत्त तंत्रिका प्रणालीको अंश प्यारासिम्पेथेटिक स्नायु प्रणाली हो, जुन तपाई आराम गरीरहनुभएको बेला वा सुताईरहेको बेलामा काममा हुन्छ, डा। बर्गलन्ड बताउँदछन्। तपाईंको शरीरको तनाव प्रतिक्रियाले प्यारासिम्पाथेष्टिक सिस्टमलाई काउन्टर गर्दछ, जुन तपाईं आराममा हुँदा काम गर्दछ। अर्थ, जब तपाईंलाई डर र आतंकले पक्राउनेछ यो उत्तेजित हुनको लागि लगभग असम्भव छ।
डिप्रेसन र चिन्ता विकारहरू
मिशगन मेडिसिनको यूरोलॉजी विभागका सहायक प्रोफेसर, एमडी, युनि यी टिप्पणी गर्दछन् - डिप्रेसन, चिन्ता, र इरेक्टाइल डिसफंक्शनको बीच एक सम्बन्ध पनि छ - सम्भवतः सामान्य जीवन असन्तुष्टि, यौन चाहनामा कमी, वा औषधि साइड इफेक्टका कारण।
प्रदर्शन चिन्ता तब हुन्छ जब तपाईंको ध्यान नकारात्मक विचारहरूमा केन्द्रित हुन्छ वा तपाईंको पार्टनरलाई खुशी पार्ने चिन्ता गर्दछ - उत्तेजना पैदा गर्ने कामुक उत्तेजना भन्दा। यो एक निश्चित प्रकारको यौन तनाव हो जसले १%% देखि २%% लाई प्रभाव पार्दछ, डा। यी अनुसार। समयको साथ, प्रदर्शन चिन्ताले आत्मसम्मान, यौन आत्मविश्वास, र साझेदार संचारलाई कम गर्न सक्छ - र सम्बन्ध विवादास्पद वा असन्तोषको कारण पनि हुन सक्छ।
सम्बन्धित: इरेक्टाइल डिसफंक्शनको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
तपाईं कसरी तनाव वा चिन्ताबाट इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्नुहुन्छ?
साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन वा प्रदर्शन चिन्ता हटाउने प्रक्रिया हो, द्रुत फिक्स होइन। डाक्टर यी भन्छन् कि बिरामीले उपचारको सुरूमा यसलाई स्वीकार्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि सम्भव छ भने, यो तपाइँको पार्टनर को लागी प्रक्रिया भर को लागी लाभदायक छ।
१. कारण पत्ता लगाउनुहोस्।
अक्सर, स्तम्भित डिसफंक्शनको कारण मल्टीफेक्टोरियल हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रायः धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, लि the्गमा रगत प्रवाहमा परिवर्तन, परिवर्तन भएको नर्व फंक्शन, हार्मोन, औषधी, पहिलेको शल्यक्रिया र मनोवैज्ञानिक कारकहरू सहित।
परिस्थिति स्तम्भन शिथिलता (जस्तै हस्तमैथुन मार्फत इरेक्शन प्राप्त गर्न सक्षम हुँदै, तर पार्टनरसँग होइन) साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनको प्रमुख लक्षण हो। यदि कारण चिकित्सा प्रकृतिमा छ भने, तपाईंको चिकित्सकले विस्तृत इतिहास पाउनेछ र एक शारीरिक प्रदर्शन गर्नेछ, सम्भवत रगत कार्य सहित। बिहानको बिदाको बेलामा उठेको बखत नोट गरिएको थियो, जबकि एक अझै पार्टनरसँग ईडीको समस्यामा छ, यसले साइकोोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनलाई पनि औंल्याउँछ।
सम्बन्धित: इरेक्टाइल डिसफंक्शन निदान गर्दै
२ ट्रिगरहरू कम गर्नुहोस्।
यदि तपाइँले पहिचान गर्नुभयो कि कुनै विशेष तनाव प्रदर्शन चिन्ता वा इरेक्टाइल डिसफंक्शनमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ भने, ती अवस्थाहरूबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्। तपाईंको पार्टनरसँगको छलफल - निर्माण अवधिको अपेक्षाहरू, अवरोधक अवधिको बारेमा घबराहट, वा शरीर असुरक्षा — यी तनाव र ईडीको ट्रिगरहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मैले कती समय लिनु पर्छ योजना b
Medication. औषधी विचार गर्नुहोस्।
PDE5 अवरोधकहरू (जस्तै भियाग्रा , Levitra, र सियालिस ) तपाईंको यौन प्रतिक्रिया बढाउन सक्छ, यदि तपाइँ तनाव वा प्रदर्शन चिन्ताको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ — तर तिनीहरू मुद्दाको जडमा नपर्न सक्छन्। धेरै चोटि जब हामी इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्दछौं, हामी वास्तवमै अनुभविक रूपमा बिरामीलाई PDE5 अवरोधकर्तामा राख्दछौं प्राथमिक समस्या सम्बोधन नगरी, डा। बरग्लुन्ड भन्छन्। यी औषधीहरूले निर्माण प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्नको लागि मद्दत गर्दछ, तर यसले अन्य अन्तर्निहित समस्याहरू जस्तै सम्बन्ध मुद्दाहरू वा कम कामवासना वा इच्छालाई सम्बोधन गर्दैन।
यदि तपाईं लामो समयसम्म चिन्ताको स्थितिमा हुनुहुन्छ भने, उत्तम समाधान मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको भ्रमणको साथ अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो। केहि अवस्थाहरूमा, चिन्ता-प्रेरित ईडी औषधीको साथ व्यवहार योग्य छ। यद्यपि डिप्रेशन, चिन्ता, वा उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिएका केही औषधीहरूले पनि ईरेक्शन पाउन गाह्रो बनाउन सक्छ। सही उपचार योजना पत्ता लगाउन तपाईंको चिन्ताको बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
A. एक चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्।
यदि यी चरणहरूले समस्या समाधान गरेनन् भने, तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर वा यौन थेरापिष्टको लागि सिफारिश गर्न सक्दछ। यी सत्रहरूले अवरोध, सञ्चार प्रविधि, चिन्ता न्यूनीकरण गर्ने तरिकाहरू र इरेक्टाइल डिसफंक्शनको मनोवैज्ञानिक पक्षहरूलाई पार गर्न मद्दत पुर्‍याउने समायोजनमा काम गर्न सक्दछन्, डा। यी भन्छन्।
यो बेडरूममा चिन्ताको प्रभाव पूर्ण रूपमा हटाउन समय लिन सक्दछ, तर हरेस नखानुहोस्। सही उपचारको साथ (र थोरै लगन), तपाईंको यौन जीवन सामान्यमा फर्कन सक्दछ।
फार्मासिष्टहरूले के गर्छन्? Things चीजहरू जुन तपाईलाई फार्मसीको बारेमा थाहा थिएन
के यो रक्सीको साथ सल्लाह लिन खराब हो?
oxycodone हाइड्रोक्लोराइड अक्सीकोन्टिन जस्तै छ
बसपिरोन ड्रग टेस्टमा देखा पर्दछ
के हो tretinoin क्रीम usp 0.1 को लागी प्रयोग
जोलोफ्टको सबैभन्दा कम खुराक कुन हो